NGABE IZIBHALO ZIKHONA NGESIBOPHEZO SESIMEMO SEZIMANDLA?
Zonke-in-one capacitive touch Kiosk chungechunge
Isitezi sokuthinta esime phansi se-IR
Uchungechunge lokukhangiswa kwesitezi esibonisa phansi
Vertical ephathekayo poster yedijithali
Isidlali sangaphandle sokukhangisa
Isikhangiso sokukhangisa esibekwe odongeni
Uchungechunge lokuthinta oluhlanganisiwe konke-kwelinye
Uchungechunge lokuthintwa kwe-IR olubekwe Wall
Umkhakha weDigital Signage ukhula unyaka nonyaka. Ngonyaka ka-2023 imakethe ye-Digital Signage isethelwe ukukhula ngo- $ 32.84 billion. Ubuchwepheshe beTouch Screen buyingxenye ekhula ngokushesha yalokhu yokucindezela imakethe ye-Digital Signage nakakhulu. Ngokwesiko i-infrared Touch Screen technologywas esetshenziswa kuzinhlelo zokusebenza zokuthengisa. Kodwa-ke ubuchwepheshe obusha obusha obaziwa nge-Procapacitive interactive asetshenziswe kuma-Smartphones buye busetshenziswa njengoba izindleko zokukhiqiza ezibandakanyekile sehlile. Emhlabeni ogcwele ama-touch Smartphones kanye namathebulethi abanye babikezela ukuthi ama-touch Screens ayikusasa lomkhakha we-Digital Signage. Kule blog ngizophenya ukuthi ngabe lokhu kunjalo noma cha. Umkhakha wezentengiso ungaphezulu kwekota yokuthengiswa kweDigital Signage kepha imboni uqobo idla isikhathi esinzima. Ukuthenga online kuphazamise ukuthengiswa kwempahla nokwenze kwaba nobunzima emigwaqweni ephezulu. Njengoba kunendawo yokuthengisa encintisana kangaka yezitolo kufanele ziguqule indlela yazo yokukhipha amakhasimende ezindlini zazo nasezitolo. Izikrini zokuthinta ziyindlela eyodwa abangakwenza ngayo lokhu, Izikrini zokuthinta zingasetshenziswa ukusiza amakhasimende ukuthola / uku-oda imikhiqizo futhi aqhathanise izinto ezijule kakhulu ngokwesibonelo. Ngokusebenzisa ukukhombisa okufana ne-PCAP Touch Screen Kiosks baba yisandiso sendlela amakhasimende athola ngayo imikhiqizo yawo kuma-smartphones nakumakhompyutha. Lolu hlobo lobuchwepheshe lungasetshenziselwa ukunika amakhasimende umuzwa oqondene nomuntu siqu futhi abenze bazibandakanye kakhulu nemikhiqizo yabo kanye nomkhiqizo. Ukusungulwa kwalapho abathengisi bangenza umehluko khona impela, ngezibonisi ezihlukile njenge-PCAP Touch Screen Mir kioo yakho bangakha okuhlangenwe nakho abathengi abangakuthola kuphela ngokungena esitolo.
Umkhakha owodwa lapho i-Digital Signage iguqula khona umkhakha wabo uku-Izindawo Zokudla Okusheshayo (QSR). Imikhiqizo ehamba phambili yemakethe eyi-QSR efana neMcDonalds, Burger King ne-KFC isiqalile ukukhipha ama-Digital Mabhodi we-Digital kanye ne-self-service interactive Screens ezitolo zawo. Izindawo zokudlela zibone izinzuzo zalolu hlelo njengoba abathengi bavame uku-oda ukudla okuningi lapho bengenayo leyo ngcindezi yesikhathi; kuholele inzuzo ethe xaxa. Amakhasimende amaningi abuye athande lezi zinhlobo zeTouch Screens ngoba ngokuvamile akudingeki ukuthi alinde isikhathi eside ukuze i-oda lawo lithathwe futhi angazizwa ingcindezi yoku-oda ngokushesha njengoba lapho emi e-counter. Njengoba isoftware yoku-oda itholakala kalula ngicabanga ukuthi ama-Screen Screens maduze azoba ejwayelekile emaketanga wokudla okusheshayo.
Ngenkathi isabelo semakethe seTouch Screens ngaphakathi komkhakha weDigital Signage sikhula kukhona izinto ezimbalwa ezibambe njengamanje. Inkinga enkulu idalwa ngokuqukethwe kokuqukethwe. Ukudala okuqukethwe kwe-Screen Screen akulula / kushesha futhi akufanele kube njalo. Sebenzisa iwebhusayithi yakho kusikrini sokuthinta akusho ukuthi kuzoletha izinzuzo ozifunayo ngaphandle kokuthi udale okuqukethwe okulungile kwesisikhombi sokubonisa esenzelwe inhloso. Ukudala lokhu okuqukethwe kungadla isikhathi futhi kubize. Izindleko zethu ezisebenzayo ze-CMS kodwa zivumela abasebenzisi ukuthi bakhe futhi baphathe okuqukethwe kwe-Touch Screens. I-Digital Signage AI kulindeleke ukuthi ibe ngomunye umkhuba omkhulu ngaphakathi embonini ongasusa ukugxila kude naseTouch Screens, ngesithembiso sokuqukethwe okunamandla okuthengiswe ngqo emaqenjini athile amakhasimende. Ama-Screen Screens uqobo abesebutha ukunakwa kwabezindaba ngokungahambi kahle kamuva nje, kusuka ekumangaleleni ngemibukiso engathandeki kuye kwizimangalo zokuzenzisa ngokuthatha imisebenzi ngokungafanele.
Izikrini Zokuthinta ZIZOba yingxenye enkulu yesikhathi esizayo embonini yeDigital Signage, izinzuzo eziningi zalobu buchwepheshe obusebenzayo zizothuthukisa imboni iyonke. Njengoba ukudalwa kokuqukethwe kweTouch Screens kuthuthuka futhi kutholakala kalula kumaSMEs ukukhula kweTouch Screens kuzokwazi ukuqhubeka nenqubekelaphambili enhle. Angikholwa nokho ukuthi ama-Screen Screens ngokwawo angakusasa, ukusebenza eceleni kwe-Digital Signage engasebenzi kodwa angancomana ngazo zonke izixazululo zezimpawu.
Isikhathi sokuthumela: Meyi-13-2020
isisekelo sonyawo lwethu, ubuholi, ubuhlakani, imikhiqizo
NGU-ANASTASIA STEFANUK JUNE 3, 2019 AUGMEN ...
BAYESHUMBUZA ISIQINISEKISO SESIQINISEKISO SE-DIGITAL S ...
Ukubheka EKUGCINENI KWAMANDLA WOKUCHITHEKA KWAMANDLA ...
UNGASIKHETHA KANJANI ISITESHI ESIPHAKATHI?
Ikheli: Isakhiwo C, iGaoke International Innovation Industry Park, iSifunda saseGuangming, eShenzhen, China
© Copyright - 2010-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo Eshisayo, I-Sitemap